Dhaktharka guud waxa uu awodaa in uu kaa baari karaa kaana daaweyn karaa xanuuno iyo cuduro kala duwan. Dhakhtarka waa qofka uugu horeeya oo xanuunka kaa caawin kara. Waxaa ka mid ah kuwaan:
xanuun jirka guud ahaan
infekshanka dhegta, wadno xanuunka
macaanka iyo waxyaabaha ku saabsan
astmaha iyo xanuunaha mariinaha hawada iyo sanbabada
traumaha yar, xanuunada kala goysyada, murqaha iyo lafaha
dhibaatooyinka niyada, walaaca iyo niyad jabka
Booqashoda dhakhtarada takhasus leh
Klinikka Elo waxa jooga dhaktharo takhasus leh oo ku baari kara oo ku daaweyn kara. Waxaa ka mid ah cudurada lafaha, traumatalogy, cudurada dhabarka, kaadi marka, cudurada dumarka iwm. Hadii aad u baahatid dhakthar takhasus khaas ah sii leh, dhakhtaradeena ayaa ku sii gudbin kara.p>
Baaritaanka iyo raajada iyo sawiritaanka
Elo klinikka waxaan ku baarnaa anaga oo qalabka haysana neef mareenka iyo wadnaha. waxaa jira qalabo khaas ah oo lagu baari karo sida infekshanka dhabanada (poskiontelotulehdus) iyo infekshanka dhegaha. Waxa aan ku baarnaa infekshanka dhabanada qalab casri ah oo tijaabo badan ka bacdii la cadeeyey in uu fiicanyahay. Marka klinikal ahaan keliya loo baaro infekshanka dhabanada waxa lagaa yaabaa in xanuun kale lagu khaldo taas oo keeneysa qofka in daaweynta ay ka raagto. Infekshanka dhegahana waxa lagu baaraa leydh khaas ah (otoscope) oo laga heleyo Klinikka Elo. Dhegaha waxa ka buuxsama ee saameyn maqalka ku yeeshana dhakhtaradeena ayaa ka soo nadiifin kara eyaga oo isticmaalaya qalabka loogu talagalay.
Xanuunada qaarkood waxa la xaqiijinkaraa marka la qaado sheybaar laboratori ah. Klinikka elo waxa jooga kalkaalisooyin aqoon badan leh oo kaa qaadi kara sheybaarka kaadida iyo dhiigga oo markaasna u gudbineya laboratoriga uugu dhow. Marka wixii sheybaar ah Klinikka Elo waa lagu qaadaa, in qofka macamiilka meel kale uu aado looma baahno laboratori daraadeed.
Xanuunada qaar waxa ay uu baahanyihiin in X-ray ama MRI lagu baaro, markaasna dhakhtaradeena ayaa idiin gudbin kara meesha uugu dhow.
Waraaqaha cadeynta xanuunka, resiitka, waraaqaha caafimaadka
Dhaktharrada Klinikka Elo waxay kuu qori karaan waraaqda cadeynta xanuunka ee shaqada haddii caafimaadkaaga marka la fiiriyo aad u baahatid. Waraaqaha warbixinta oo dhakhtarka ka socda iyo waraaqaha kale ee cadeynta (sida waraaqda cadeynta A, B, C, E) oo laga aqbalo KELAda Finland waxaad ka heli kartaa isbitaalkeena. Waxa kale oon ku siin karno waa waraaqda caafimaadka ee waditaanka baabuurka (ajokorttitoditus) ama waraaqda caafimaadka ee shaqada lagaa weydiin karo (terveystodistus).
Klinikka Elo waxaan ku xiranahay Kanta marka dhakhaatiirta waxay kuu qori karaan daawooyin farmasiga toos loogu diri karo oo aad ka soo gadan kartiin. Taasi waxa ay keeneysaa in aan waraaqo badan aanad u baahan maadaama toos loogu dirayo farmasiga.
Shaqada socialka iyo waxbarashada
Klinikka Elo meel ku nooc leh ma jirto maadaama aan xil iska saarnay in aan ajnabiga ku caawino in ay dhex galaan bulshada. Shaqaalaheena cilmiga leh ayaa caawinaya ajnabiga sida ay uula qabsadaan bulshada ay ku jiraan. Waxa kale oo qabanaa koorso iyo seminaaro oo ah qudbad ku saabsan dibaatooyinka dhanka socialka iyo niyada oo ku saabsan ajnabiga. Dhacdooyinkaan marka aan qabanqaabino waxaa imaan doona dad cilmi iyo takhasus leh oo la imaan doona xaalal ku saabsan la qabsashada bulshada Finland.
Klinikka Elo waxa ku xiran oo isla shaqeyaan dad waxbara oo dhiga jaamacadaha. Isla shaqeyntaan waxa ay keeneysaa macalimiinta iyo ardayda ay ka wada hadlaan cilmiga ay leeyihiin iyo khibradaba. Dadka da’da yarna waxa ay soo dhex geli karaan meel dad dhaqamo duwan leh ay ka shaqeeyaan. Waxa Klinikka Elo aad ugu muhiim ah cilmiga ku saabsan caafimaadka iyo ajnabiga wadanka Finland. Marka aan cilmi leenahay waxa aan ka hortagi karnaa khalaadaadka dadka ay fahansanyihiin iyo ncaybka ajnabiga loo qabi karo.